कठै मान्छेको भाग्य ! अहिलेसम्म २५ जनासंग विवाह गरे तर म र्ने बेलामा यी बुबा एक्लै छन् (भिडियो हेर्नुस्) – Kavrepati
Home / समाचार / कठै मान्छेको भाग्य ! अहिलेसम्म २५ जनासंग विवाह गरे तर म र्ने बेलामा यी बुबा एक्लै छन् (भिडियो हेर्नुस्)
admin December 1, 2021	समाचार Leaveacomment 105 Views
भनिन्छ बिबाह भनेको एउटा यस्तो पबित्र बन्धन हो जसमा मान्छे जिबनमा एकपटक मात्र बाधिन्छ तैपनी हाम्रो समाजमा मान्छेहरुले दोस्रो देखि लिएर तेस्रोपटकसम्म बिबाह गरेको खबर हामी देख्न अनि सुन्न पाउछौ तर आजको घटना भने त्यस्ता पुरुषको विषयमा रहेको छ जसले एकपटक दुइपटक नभएर पच्चीस पटकसम्म बिबाह गरेका छ्न ।
सुन्दा तपाइलाइ अ”चम्म लाग्नु स्वभाबिक नै हो तर यो कुरा सत्य रहेको छ । मोरङ जिल्लाको सुन्दरहरैचा नगरपालिका वडा नम्बर ६ तिनपैनिमा बस्दै आइरहेका ढकलबहादुर नाम गरेका एक बृद्धले पच्चीस जनासग बिबाह गरेका छन तर दु”र्भाग्यबश उनि अहिले एक्लै एउटा सानो घरमा बसोबास गरिरहेका छ्न । २५ जना श्रीमतीहरुमध्य कसैसग पनि राम्रो घरबार भने हुन सकेन उनको ।
२०२२ सालमा शिबकुमारी नाम गरेकी महिलासग उनले पहिलो बिबाह गरेका रहेछ्न र त्यतिबेला उनी मात्र १८ बर्षका रहेछ्न । पहिली श्रीमतीले छाडेर गएपछी उनले दोस्रो बिबाह गरे र त्यसपछि भने उनले बिबाह गर्ने क्रम जारी रह्यो । कोहिसग नराम्रो सम्बन्ध हुने त कसैले छाडेर गएपछी उनि एकपछी अर्को बिबाह गर्न बा”ध्य भए ।
२०२२ देखि २०३२ सम्मको १० बर्षको अबधिमा नै उनले १५ बिबाह गरेछ्न । एकैदिनमा दुई श्रीमती पनि भि”त्राएछ्न उनले । यसैगरी २०४५ सालमा थुप्रीमायासग भने उनले पच्चिसौ बिबाह गरेका रहेछ्न । उनको पच्चीसौ बिबाह पनि सफल भने भएन, उनले पनि यो संसार छा”डेर गएपछी आज उनि ए”क्ला भएका छ्न । यत्तिका बिबाह गर्दा पनि एक सन्तान पनि भएनन उनका कस्तो अचम्म । क”ठै बुबा अब बाकी केही रहेन भन्दै गु”ना”सो गर्छन ।
Next बाल्यकालदेखि नै अभिनेत्री प्रियंका छिन् यो रोगबाट पिडित !